Chishandiso chitsva cheApple cheWindows 10 ichavhurwa gore rino | IPhone nhau
Iyo itsva Apple app ye Windows 10 ichavhura gore rino
Nekuvhurwa kweMacOS Catalina, Apple yakabvisa chero trace yeTunes, iyo yese-in-one application yakange yave musoro kune vese vashandisi vakamanikidzwa kuishandisa nekuda kwenhamba yakakura yemabasa inosanganisirwa kunyangwe mumakore apfuura mabasa mashoma akange abviswa kuwedzera matsva.
Nekudaro, muWindows, vashandisi vachiri neiyo iTunes application, application iyo inosanganisa ese maApple services, kusanganisira iko kunyorera kunakirwa nerusununguko mimhanzi sevhisi yeCupertino varume. Asi izvo zvinogona kuchinja gore rino kana runyerekupe rwekupedzisira rwakaburitswa newebsite yeItaly rikaitika.
Zvinoenderana newebsite yeAggiornamenti Lumia, Apple inoronga kuvhura chishandiso chitsva cheWindows, chishandiso icho ichave iripo zvakananga kuburikidza neMicrosoft Store, kwatinogona kuwana izvozvi application iTunes. Iri bhuku haritaure zvakadzama nezvekushandisa asi hazvinetsi kufungidzira kuti zvingave zvekushandisa sei: Apple Music neApple TV +.
Gore rapera, Apple yakatumira basa kutumira vaninjiniya kuti vavake iyo chizvarwa chinotevera chemultimedia mafomu eWindows, kupihwa basa uko chimwe chezvinhu zvakakosha zvaida kuve nacho ruzivo muUniversal Windows Platform (UWP), kuitira kuti ugadzire inoenderana application yevese Windows 10 uye mamwe maWindows ecosystems, ayo mune ino anga ave Xbox yeMicrosoft.
Nenzira iyi, Apple inoda nyore kuwana Apple Music uye Apple TV + kune vashandisi vanoshandisa Microsoft koni senzvimbo yemultimedia mudzimba dzavo. iTunes yakasvika paMicrosoft Store muna 2018, chishandiso chatinogona kunakidzwa nacho Apple Music, edu anodikanwa podcast, kuverenga mabhuku ... mabasa ayo kubvira pakatangwa macOS Catalina, ave akazvimiririra zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo itsva Apple app ye Windows 10 ichavhura gore rino
Podcast 11x44: Machaja, Mabhatiri uye Makambo
Apple vhidhiyo parody pane telecommuting